नि: शुल्क राज्य महिमा (भाग 54): बेहतर दिन अगाडि, भाग 3
पाठ: प्रकाश 22: 12-21
12 अनि हेर, म चाँडै आउँछु। र मेरो इनाम मेरो साथ हो, हरेक मानिस आफ्नो कामको रूपमा दिनेछु।
13 म अल्फा र ओमेगा हुँ, शुरुवात र अन्त, पहिलो र अन्तिम हुँ।
14 धन्यहरू तिनीहरू आफ्ना आज्ञाहरू हुन्, कि तिनीहरूले जीवनको रूखको सही हुन सक्छ, र प्रवेश द्वारहरू भित्र शहरमा प्रवेश गर्न सक्छन्।
15 कुकुरहरू, र जादूगरहरू, भान्साहरू, हत्याराहरूले, र मूर्तिहरू, र जो कोहीलाई प्रेम गर्दछ र झूटो बनाउँछ।
16 मैले यीशुले चर्चमा यी कुराहरूलाई गवाही गर्न मेरो दूत पठाएको छु। म दाऊदको मूल र सन्तान हुँ र उज्ज्वल र बिहानको तारा हुँ।
17 र आत्मा र दुल्हन भन्छन्, आओ। अनि उसलाई सुनेको छ, आओ। र उहाँलाई आएर आउँछ कि गरौं। अनि जो कोहीले, उसलाई स्वतन्त्र जीवनको पानी लिन दिनुहोस्।
18 किनकि म हरेक व्यक्तिलाई यस पुस्तकको भविष्यवाणीको वचन सुनेको प्रमाण दिन्छु, यदि कुनै व्यक्ति यी कुराहरूमा थपिनेछ, परमेश्वरले त्यसलाई यस पुस्तकमा लेखिएका विपत्तिहरू थप्न सक्नुहुनेछ:
19र यदि कुनै व्यक्ति यो अगमवाणीको पुस्तकबाट टाढा जान्छ भने, परमेश्वरले आफ्नो जीवनको जीवन र पवित्र शहरबाट र यस पुस्तकमा लेखिएका चीजहरूबाट भाग लिनुहुनेछ।
20 उहाँले कसलाई यो कुरा बताउनुहुन्छ, निस्सन्देह म चाँडै आउँछु। एमेन। यद्यपि, आउनुहोस्, प्रभु येशू।
21 हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रहले तिमीहरूको साथमा रहनेछ। एमेन।
हाम्रो अन्तिम सन्देशमा, हामी अझ राम्रो दिन अगाडिको प्रतिज्ञाको साथ यीशु मसीहको सम्मोहक निमन्त्रणा 'COME' जोडाहरूमा भेट्न जारी राख्नुभयो। यूहन्नाको दिनका संतहरूले आशाको यो सन्देश चाहिन्छ; हाम्रो संसार आज आशाको यो सन्देश चाहिन्छ; र संसारमा भविष्यवाणी गरिएको छ कि प्रकाशमा निश्चित रूपमा यो आशाको सन्देश चाहिन्छ। आशाको सन्देशको साथमा हामी "आओ" को निमन्त्रणा छ। "आत्मा," पवित्र आत्मा हो भन्छन्, "आउनुहोस्।" तर यूहन्नाले यस्तो लेख्छ कि "दुलही" पनि भन्छ, "आओ।"
दुलही चर्च, ख्रीष्टको शरीर हो। हामीले आफैले मात्र निमन्त्रणा प्राप्त गर्नु हुँदैन, तर हामीले यसलाई पास गर्नु पर्छ। हालको साताहरूमा, धेरै लेखिएको छ र सन्देश दु: खी दुलहीको बारेमा बताइएको छ, चर्च, संसारलाई पठाउँदै छ। हामी के भन्न सक्छौं? केही "आ" र "सेभ" बोल्दै यस सेवकाईमा बोल्छन् र तपाईं आर्थिक रूपमा समृद्ध हुनेछौं। केहि "आ" भन्न र यो राजनीतिज्ञको लागि हामी चाहानुहुन्छ। केहि "हाम्रो" चर्च आउँदैछन् र तपाईं खुसी र सहज हुनेछौं।
तर, जब हामी भन्छौं, "आओ," हामीले त्यही कुरा भनेको आत्माको अर्थ बुझ्नु पर्छ। वारेन Wiersbe लेख्छन्, "विश्वासीहरू ख्रीष्टलाई भरोसा राख्न र जीवनको पानी पिउनको लागि गुमाएका पापीहरूलाई निम्तो दिनुपर्छ। वास्तवमा, जब चर्च ख्रीष्टको फिर्तीको आशामा रहन्छ, त्यस्ता मनोवृत्तिले प्रचार र सुसमाचारलाई पनि हृदयको शुद्धता दिन्छ। परमेश्वरको अनुग्रहको अरूलाई बताउन। बप्ति भविष्यवाणीको साँचो बुझाइले हामीलाई परमेश्वरको वचन पालन गर्न र हराएको संसारको साथ परमेश्वरको निमन्त्रणा साझा गर्न उत्प्रेरित गर्नुपर्छ। "
हामीले येशू ख्रीष्ट र पवित्र आत्माको निमन्त्रणासँगै पास गर्नु पर्छ। र त्यसो गर्न धेरै अवसरहरू छन्। यस पछिल्लो वर्ष यौन यौन दुर्व्यवहारमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई चर्चको सन्देश हुनुपर्छ, "आओ, र ख्रीष्टले तपाईंको चोटहरू निको पार्नु होस्।" "आउनुहोस्, र ख्रीष्टले तपाईंको भित्री हृदयलाई परिवर्तन गर्न दिनुहोस्।" ओपियोइड संकटले प्रभावित भएकाहरूलाई, हामी भन्छौं, "आउनुहोस् र ख्रीष्टलाई तपाईंको जीवनमा गहना तोक्नुहोस्।" ती व्यक्तिहरूले यस वर्ष हिंसा र प्राकृतिक आपदाहरूलाई परिवारको सदस्य गुमाए, हामी भन्छौं, "आउनुहोस्, र ख्रीष्टले तपाईंको निराशामा सान्त्वना दिनोस्"। ती व्यक्तिहरु जसले आफ्नो जागिर गुमाए, उनीहरूको आजीवन, उनीहरूको पेंशन, वा के के छ, हामी भन्छौं, "आउनुहोस्, र ख्रीष्टले तपाईंलाई जीवनलाई धेरै प्रशस्त दिनुहुन्छ।" ती संसार-थोरै, पाप-बीमार आत्माहरू, हामी भन्छौं, "आउनुहोस्, उद्धार प्राप्त, परमेश्वरसित सम्बन्ध र स्वर्गमा एक घर।"
आओ, तिमीहरू विचलित हुन्छौ, जहाँ पनि तिमी निस्किन्छौ,
दयालु सीटमा आउनुहोस्, घृणा गर्नुहोस्।
यहाँ आफ्नो घायल हृदय ल्याउनुहोस्, यहाँ तपाईंको पीडा बताउनुहोस्;
पृथ्वीमा कुनै दुःख छैन कि स्वर्गलाई निको पार्दैन।
यहाँ जीवनको रोटी हेर्न, पानी बहिरहेको हेर्नुहोस्
फोहोरको सिंहासनबाट, माथिबाट शुद्ध।
प्रेमको पर्वमा आउनुहोस्; आउँदैन
पृथ्वीमा कुनै दुःख छैन तर स्वर्गलाई निको पार्न सक्दैन।
चर्च, के तपाई आज निमन्त्रणा विस्तार गर्नुहुन्छ? पापीहरू, तपाईंले आज निमन्त्रणा पाउनुहुनेछ? ख्रीष्ट भन्छ, "मलाई आउनुहोस्, तिमीहरू सबै श्रम र भारी लुगा लगाउँदछौ, र म तिमीहरूलाई आराम गर्नेछु। आओ, र तिमीहरूले आफ्नो प्राणमा आराम पाउनेछौ।"
मलाई देखाउन अनुमति दिनुहोस् तपाईं कसरी आफ्नो आत्मामा आराम गर्न सक्नुहुन्छ कसरी येशू ख्रीष्टमा विश्वास र भरोसा राखेर।
रोमी 10:9र 13 ले भन्छ, "यदि तिम्रो मुखले प्रभु येशूलाई स्वीकार गर्दछ, र तिम्रो हृदयमा विश्वास गरोस् कि परमेश्वरले उसलाई मरेकाहरूबाट उठाउनुभएको छ, तपाईंले मुक्ति पाउनुहुनेछ ... को लागि कसलाई प्रभु उद्धार हुनेछ। "
यदि तपाईं विश्वास गर्नुहुन्छ कि येशू ख्रीष्ट तपाईंको पापको लागि क्रूसमा मर्नुभयो, मर्नुभयो, र मरेकाहरूबाट उठ्नुभयो, र आज उहाँ आफ्नो मुक्तिको लागि उहाँमाथि भरोसा राख्नुहुन्छ, कृपया मलाई यो सरल प्रार्थना प्रार्थना गर्नुहोस्: पवित्र पिताजी परमेश्वर, म बुझ्छु कि म पापी हुनुहोस् र मैले मेरो जीवनमा केही खराब काम गरेँ। म मेरा पापहरूको लागि माफी चाहन्छु, र आज म मेरो पापबाट टाढा छनौट गर्न चाहन्छु। येशू ख्रीष्टको निम्ति, कृपया मलाई मेरो पाप क्षमा गर्नुहोस्। म मेरो सम्पूर्ण हृदयमा विश्वास गर्दछु कि येशू ख्रीष्ट मेरो निम्ति मर्नुभयो, दफन गरियो र फेरि उठ्नुभयो। म येशू ख्रीष्टलाई मेरो मुक्तिदाताको रूपमा भरोसा गर्दछु र म यस दिन अगाडी भगवानको रूपमा पछ्याउन चाहन्छु। प्रभु येशू, कृपया मेरो हृदयमा आउनुहोस् र मेरो प्राण बचाउनुहोस् र आज मेरो जीवन परिवर्तन गर्नुहोस्। एमेन।
यदि तपाईंले येशू ख्रीष्टलाई तपाईंको मुक्तिदाताको रूपमा मात्र विश्वास गर्नुभयो भने तपाईंले प्रार्थना गर्नुभयो र यो तपाईंको हृदयबाट अर्थ दिनुभएको थियो, म तिमीहरूलाई परमेश्वरको वचनमा आधारित भन्छु, अब तपाईं नरकबाट सुरक्षित हुनुहुन्छ र तपाईं स्वर्गमा हुनुहुन्छ। परमेश्वरको परिवारमा स्वागत छ! बधाई छ जीवनमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा गर्ने र यी ख्रीष्ट येशूलाई तपाईंको प्रभु र मुक्तिदाताको रूपमा प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ। अधिक जानकारीको लागि तपाईं ख्रीष्टमा आफ्नो नयाँ विश्वासमा बढ्न मद्दतको लागि, सुसमाचार लाइट सोसायटीमा जानुहोस् र पढ्नुहोस् "तपाईं दरवाजा मार्फत के गर्न पछि के गरौं।" येशू ख्रीष्ट यूहन्ना 10:9मा भन्नुभयो, "म ढोका हुँ: मेरो द्वारा यदि कुनै मानिसले भित्र प्रवेश गर्दछ, उसले मुक्ति पाउनेछ, र बाहिर र बाहिर जान्छ, र चरा फेला पार्छ।"